प्रवचन Archives - परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाज
योचाहिँ आत्मा पुनर्जीवित गराउने परमेश्वरको वचनलाई दिनरात मनन गर्न सक्ने गरी तयार पारिएको खण्ड हो ।
सर्वशक्तिमान् परमेश्वरले आफ्ना सन्तानहरूलाई बोलाउनुभएर तिनीहरूद्वारा आफ्ना महान् कार्यहरू पूरा गर्नुभएको छ भन्ने कुरा बाइबलको इतिहासद्वारा बुझ्न सकिन्छ । सम्पूर्ण थोकको सृष्टिकर्ता परमेश्वरले प्रत्येक युगमा यहोशू, शमूएल, दाऊद, पत्रुस र यूहन्नाजस्ता विश्वासका पुर्खाहरूलाई बोलाउनुभएर परमेश्वरको वचनको ज्योति ननिभोस् तर निरन्तर चम्किरहोस् भनी तिनीहरूलाई नियुक्त गर्नुभएको छ । यो अन्तिम युगमा,…
हिजोआज परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौं भन्ने मण्डलीहरू संसारमा असंख्य छन् । तर मुक्तिको प्रतिज्ञा समाविष्ट परमेश्वरको चाड, नयाँ करार निस्तार-चाड मान्ने मण्डलीचाहिँ परमेश्वरको मण्डली मात्र हो । “मेरा प्रजा ज्ञानको कमीले गर्दा नष्ट भएका छन्” (होशे ४:६) भन्ने वचनजस्तै, अधिकांश मानिसहरूले बाइबललाई सही तरिकाले बुझेका छैनन् । तिनीहरू “निस्तार-चाड नमाने पनि…
विपत्ति र निस्तार-चाड
हामीहरू दैनिक जसो विपत्ति र दुर्घटनाका खबरहरू सुनिरहेका हुन्छौं । विभिन्न किसिमका विपत्तिहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो विपत्ति के होला ? हामीलाई कुनै भयानक विपत्तिबाट बचाउन परमेश्वरले निस्तार-चाड भन्ने औषधी बनाउनुभयो । त्यसोभए त्यो भयानक विपत्ति के होला ? मानिस मरेपछि, उसलाई यो संसारको कुनै पनि विपत्तिले केही असर गर्न सक्दैन ।…
निस्तार-चाड र मुक्तिको सत्यता
वर्तमान समयमा मानिसहरूले परमेश्वरको वचनलाई त्यागिरहेका छन् । परिणामस्वरूप संसारमा जताततै विपत्ति झरिरहेको छ, अनि संसार आत्मिक तिर्खाले छटपटाइरहेको छ (आमो ८:११; यर ४४:२३) । तापनि तिनीहरू “निस्तार-चाड हाम्रो मुक्तिसँग सम्बन्धित छैन, हामीले यो मान्न आवश्यक छैन” भन्दै निस्तार-चाडको सत्यतालाई इन्कार गर्ने गर्छन् । २,००० वर्षअघि येशूज्यूले शास्त्री र फरिसीहरूलाई…
निस्तार-चाड र प्रतिज्ञाको चिन्ह
पृथ्वीका हरेक ठाउँहरूमा झरिरहेको विपत्तिका कारण अहिले सारा संसार चिन्तित अवस्थामा छ । युद्ध र द्वन्द्व मात्र होइनकि भूकम्प, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोटन र असामान्य मौसम परिवर्तन जस्ता विपत्तिहरू निरन्तर झर्नेछन् भनेर बाइबलमा हजारौँ वर्षअघिदेखि नै चेताउनी दिइएको थियो । हामी जिइरहेको यस पवित्र आत्माको युगमा यी सम्पूर्ण विपत्तिहरू एकै चोटि…
परमेश्वरले दियाबलसको शक्तिलाई नष्ट गर्न र आफ्ना सन्तानहरूलाई अनन्त जीवन दिन निस्तार-चाड स्थापना गर्नुभयो । हुन त हाम्रा सियोनका परिवारहरूलाई निस्तार-चाडको महत्त्व राम्ररी थाहा छ, तापनि निस्तार-चाडद्वारा विपत्ति पार हुने कारण के हो भन्नेबारे हामीले अझ ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्न आवश्यक छ । निस्तार-चाडको साँचो अर्थ के होला ? हामीबाट विपत्ति…
आत्मिक संसारलाई हेरौं
हामीहरू स्वर्गीय घरको आशा गर्दै यो पृथ्वीमा प्रवासी जीवन बिताइरहेका छौं । यो दृश्य र सीमित संसारमा शरीरको लुगा लगाएकोले हाम्रो मन सांसारिक थोकहरूमा सजिलैसित आकर्षित हुन जान्छ । त्यसैले हामीहरू आत्मिक संसारलाई हेर्न सक्दैनौं । सांसारिक थोकहरूमा अल्झिँदा हामीले परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्न सक्दैनौं । विश्वासमा बढ्न सक्दैनौं, अनि हामीमा…
परमेश्वरले हामीलाई कुनै कुराको अनुरोध गर्नुहुँदा निश्चय नै त्यो कार्यमा आशिष् दिन चाहनुहुने परमेश्वरको इच्छा लुकेको हुन्छ । यो समयका हामीहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्ने जिम्मा दिइएको छ । योचाहिँ वास्तवमा अरूको मुक्तिको निम्ति मात्रै नभएर हाम्रो आफ्नै आत्माको मुक्तिको निम्ति हो । यो वास्तविकतालाई हृदयमा राखेर हामीहरू विश्वासको बाटोमा हिँड्नुपर्छ…
निम्न सुरुवात र महान् अन्त
हाम्रो सुरुको अवस्था निम्न देखिए तापनि हाम्रो अन्तचाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा महान् हुनेछ भन्ने आशामा हामीहरू जिइरहेका छौं । हामीहरू प्रतिज्ञाका सन्तानहरू हौं । त्यसैले परमेश्वरको प्रतिज्ञा संसारका अरू मानिसहरूलाई होइन, तर हामीहरूलाई दिइएको छ । तपाईंको सुरुको अवस्थाहरू निम्न देखिनेछन्, त्यसरी तपाईंको अन्त अति महान् हुनेछ । अयू ८:७ यो…
सियोनका परिवारहरूले विश्वासभित्र एकै मनका भएर परिश्रम गरिरहनुभएको परिणामस्वरूप विश्वभरि ७,०००भन्दा बढी सियोनहरू स्थापना भएका छन् । आश्चर्यजनक मुक्तिको कार्यलाई हेर्दै, कसै-कसैले प्रधान कार्यालयको फलानो विभाग योजना बनाउनमा सिपालु भएकोले यस्तो हुन सकेको हो, र कसैले चाहिँ उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता भएका पादरी कर्मचारीहरू र मिसनरीहरू भएकाले यस्तो परिणाम आउन सकेको…